Yanmar မှ YM ထွန်စက်သစ် မိတ်ဆက်ခြင်း｜2019 နှစ်｜သတင်း｜YANMAR
Yanmar မှ YM ထွန်စက်သစ် မိတ်ဆက်ခြင်း
နှစ် ၊ လ ၊ နေ့
ဖုန်းနံပါတ် : 09799901228
အီးမေးလ် : wiredailsa@gmail.com ဖြင့်
Ailsa ထံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
The YM357A tractor with rotary tiller (မြေထွန်ယက်ခုံ နှင့် YM357A ထွန်စက်)
Bangkok, Thailand (January 29, 2019) – “လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော အရှေ့တောင်အာရှ လယ်ထွန်စက်စျေးကွက်သို့ YM ထွန်စက် ဝင်ရောက်လာမှုနှင့်အတူ Yanmar သည် ၂၁ ရာစု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို ဖြန့်ဝေပေးနေပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာစေရန် နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးအမြတ်အား မြှင့်တင်ပေးရန် အသင့်ရှိသည်” ဟု Yanmar Agribusiness Corporation ၏ ဥက္ကဌ Hiroaki Kitaoka မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
YM Tractor (YM ထွန်စက်)
Yanmar ၏ ပစ္စည်းအသစ်များဖြစ်သော YM351A ( မြင်းကောင်ရေ : ၅၁ ကောင် ) နှင့် YM357A ( မြင်းကောင်ရေ : ၅၇ ကောင်) လယ်ထွန်စက်များသည် ဒေသဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် နည်းပညာအသစ် ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စက်မောင်းနှင်သူ၏ လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပြီးမြောက်နိုင်ပြီး အကျိုးအမြတ်များရရှိရန်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများသည် လယ်ကွင်းများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြသကဲ့သို့ ကုန်းမြေပေါ်တွင်လည်း ပြောင်း ၊ ကြံ နှင့် အခြားသောကောက်ပဲသီးနှံအမျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနှင့် အမြတ်အစွန်းများများရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကန်ထရိုက်တာများမှ လယ်ကွင်းများတွင် ပေါ့ပေါး၍ အလုပ်ပြီးမြောက်လွယ်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော မြင်းကောင်ရေ ၅၀-၆၀ အားရှိ ထွန်စက်များဖြင့် ထွန်ယက်ကြသည်။ Yanmar ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည့်အပြင် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သော နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာ Ken Okuyama မှ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော YM series သည် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် မြင့်မားပြီး လုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကန်ထရိုက်တာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။
YM ပစ္စည်းအသစ်အားလုံးသည် လယ်ကွင်းများ၊ ကုန်းမြေများတွင် ထွန်ယက်နိုင်ရုံသာမက ကုန်စည်ပစ္စည်းများကိုလည်း သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စက်မောင်းနှင်သူနှင့် လယ်သမားများ၏ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပိုမိုရရှိလာရန်အတွက် အဆင့်မြင့် တည်နေရာလမ်းညွှန် လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
YM ၏ အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
SMARTASSIST Remote (SAR) သည် အသုံးပြုသူများအား စမတ်ဖုန်း မှတစ်ဆင့် ထွန်စက်နှင့် ပတ်သက်၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များရရှိနို်င်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ SAR ၏ တည်နေရာလမ်းညွှန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ (geolocation features) သည် စက်မောင်းသူအား စက်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိကြောင်း တိတိကျကျ သိမြင်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် SARစက်မှ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနေရာအား သွေဖယ်၍ လုပ်ဆောင်လျှင်ဖြစ်စေ ၊ သတ်မှတ်ထားသော ဘောင်ကို ကျော်လွန်သွားလျှင်ဖြစ်စေ သတိပေးအချက်ပြမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးရလာဒ်များအနေဖြင့် စက်ချို့ယွင်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဝင်ငွေကောင်းလာစေသည့်အပြင် လယ်သမားများအား စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ SAR သည် YM351A နှင့် YM357A နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် စံချိန်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Powerful and Fuel-efficient Engine (စွမ်းအားပြည့်ဝ၍ ဆီကုန်သက်သာသော အင်ဂျင်)
အင်ဂျင်တွင် ပျက်စီးလွယ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် မြင့်မားသော ဆန်းသစ်တီထွင်ထားမှုများ ပူးတွဲပါဝင်ပါသည်။
-	ဖိအားများသောအခါတွင် ဆီများအား အမှုန်အမွှားများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော Monoplunger fuel injection pump
-	လောင်ကျွမ်းမှုအားကောင်းလာစေရန် တစ်မူထူးခြားသောပုံစံနှင့် Combustion chamber
Optimum Gear Selection for Work (အလုပ်အတွက် သင့်လျော်သော ဂီယာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း)
ဂီယာအချိုးပိုင်းတွင်လည်း ရှေ့ဂီယာ (၈) ချက် ၊ နောက်ဂီယာ (၈) ချက်နှင့် အကောင်းဆုံး ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဂီယာအချိုးပိုင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထပ်နေခြင်းသည် အမြန်နှုန်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်နှုန်းကောင်းရန်အတွက် စွမ်းအားအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆီကုန်သက်သာ၍ ပိုင်ရှင်၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် အထောက်အကူပြု ပါသည်။
Versatile Workload ( စွယ်စုံ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း)
YM ထွန်စက်သည် ကုန်းမြေ ၊ လယ်ကွင်းများတွင် ထွန်ယက်ရန် နှင့် ကုန်စည်များ သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အမျိုးအစားတူများကြားအားကျရလောက်အောင် အများဆုံး ၅၅ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောကြောင့် မြေထွန်ယက်စဉ်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံများအပေါ် ဖြတ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ ရွှ့ံထူသော မြေသားတွင်လည်းကောင်း အပျက်အစီးမရှိဘဲ ထွန်ယက်နိုင်ရန်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
YM သည် အလုပ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အထူးထုတ်လုပ်ထားသောဒီဇိုင်းအသစ်နှင့် လည်ပတ်သောထွန်ယက်အတွင်းသို့ မြေသားများမဝင်အောင် ကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့် စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
Ergonomic Comfort (လုပ်ငန်းခွင်တွင် သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း)
ထိုင်ခုံအပြားနှင့်အတူ သက်တောင့်သက်သာရှိသောထိုင်ခုံ ပါရှိခြင်းကြောင့် YM ထွန််စက်သည် သက်တောင့်သက်သာနှင့် လွယ်ကူစွာ မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။ စက်မောင်းသူသည် ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် PTO လုပ်ဆောင်မှုအား စတင်နိုင်သကဲ့သို့ အလွယ်တကူ ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
Model 4TNV88 4TNV94L
Type4Cylinders, Direct Injection, Vertical, Water-Cooled, Diesel
Total Displacement [L] 2.190 3.054
Gross Power [kW (HP) / rpm] 38.0 (51.0) / 2800 42.4 (57.0) / 2400
Fuel Tank [L] 50
(without 3-point hit) [mm] 3330 3380
Overall Width [mm] 1580
Overall Height [mm] 2570
Wheel Base [mm] 1900 1970
Min. Ground Clearance [mm] 425
Tread [mm] Front:1252 (Standand) / 1404 Front:1238 (Standand) / 1320
Tire [inch] Front:8 - 18 Rear:13.6 - 26
Brake Mechanical, wet disk
Main shift synchronized (4stage)
Reverser synchronized Reverser
Number of shift 8 forward and 8 reverse
[km / hr] 2.4 - 28.0 2.6 - 29.4
[km / hr] 2.4 - 28.0 2.6 - 29.3
Max. Lift Force at lower link end [kN (kgf)] 14.2 (1450)
[PTO speed / engine rpm] 540 / 2430 540 / 2096
Note: All technical data, measurement and weight are approximate, and the manufacturer has the right to make alteration without prior notice.
YM ထွန်စက်သည် 2019 ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ စတင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး နောင်လာမည့် နှစ်များတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောင်းချသွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။
About Yanmar ကုမ္ပဏီအကြောင်း
1912 ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာ မြို့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Yanmar ကုမ္ပဏီသည် 1933 ခုနှစ်တွင် ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင် ပြုလုပ်ရာတွင် ပထမဆုံး အောင်မြင်သော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Yanmarသည် ၄င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အညီ ၄င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ဆက်လက်တိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး စက်မှုလယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအား အဖက်ဖက်မှ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်အကြီး၊ အသေးများ ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ ၊ စွမ်းအင်စနစ်၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို အထောက်အပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Yanmar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီပွားရေးလုပ်ငန်းမှ နယ်ပယ် (7) ခု အထိ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက Yanmar ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဆိုက်ဖြစ်သော
မှတ်ချက် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည့် သတင်းအချက်လက်မှာ ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်တွင် မှန်ကန်ပြီး မကြာမီကရနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်တော့ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်သည်။
2019 နှစ် (1)
2018 နှစ် (1)
အရေးကြီးသည့် ထုတ်ကုန် သတင်းအချက်အလက်